Thailand, Germany, Canada na -ekerịta dike ọhụrụ na -ahụ maka njem: Jens Thraenhart, makwaara dị ka Maazị Mekong.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Thailand, Germany, Canada na -ekerịta dike ọhụrụ na -ahụ maka njem: Jens Thraenhart, makwaara dị ka Maazị Mekong.
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Akwụkwọ akụkọ USA
Network Tourism Network bụ ndọtị nke nwughari. Njem nlegharị anya na nzaghachi ọrịa COVID. Mmemme ndị dike na -amata ndị mmadụ na -egosipụta ume n'ime mpaghara. Onye dike njem nlegharị anya mbụ si Thailand bụ onye mbịarambịa, Maazị Jens Thraenhart.
Thailand nwere dike njem nlegharị anya mbụ nke ndị obodo nyere ya Network Njem Nleta Ụwa.
Jens Thraenhart nabatara nhọpụta ya ka ọ banye Ụlọ Nzukọ Ndị dike njem nlegharị anya mba ofesi
Jens Thraenhart bụ nwa amaala German-Canada bi na alaeze Thailand.
Ọ nwere ihe karịrị afọ 25 nke njem mba ofesi, njem nlegharị anya, na ahụmịhe ile ọbịa, na-agbasa ọnọdụ na arụmọrụ, azụmaahịa, mmepe azụmahịa, njikwa ego, atụmatụ atụmatụ, na e-azụmahịa. Na mbido ọrụ ya, Jens nwere ọmarịcha azụmaahịa ka ọ hiwere ma na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ nri nri na-aga nke ọma, na-amalite ụlọ ọrụ ịntanetị njem ntụrụndụ ịntanetị nke New York na ijikwa ebe egwuregwu golf okomoko nwere onwe na Germany.
Na 2014, ministri njem nlegharị anya nke Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar na China (Yunnan na Guanxi) họpụtara Jens Thraenhart ka ọ bụrụ onye isi Mekong Tourism Coordinating (MTCO) dị ka onye isi oche ya. na 2008, o hiwere ụlọ ọrụ ahịa ahịa dijitalụ China nke na-emeri nzere Dragon Trail na 2009, wee duru ndị ahịa na atụmatụ atụmatụ ịntanetị na Canadian Tourism Commission na Fairmont Hotels & Resorts. Kemgbe 1999, ọ bụ onye isi oche nke Chameleon Strategies.
N'ịbụ onye gụrụ akwụkwọ na Mahadum Cornell nwere Master of Management of Management in Hospitality, yana Bachelor of Science sitere na Mahadum Massachusetts, Amherst, na Mahadum Center 'Cesar Ritz' na Brig, Switzerland, a matara Thraenhart dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ njem kacha elu 100 na -ebili site na Magazin Njem Njem na 2003, edepụtara dị ka otu n'ime HSMAI 25 Kachasị Ahịa na Echiche Ịzụ ahịa na Ọbịa na Njem na 2004 na 2005, akpọrọ ya dị ka otu n'ime echiche 20 pụrụ iche na njem Europe na Ọbịa ile ọbịa na 2014. Ọ bụ onye otu Mgbakwunye UNWTO, onye otu Board PATA, na onye isi oche gara aga nke PATA China.
Peter Richards nke Tourlink Project na Thailand họpụtara ya ka ọ bụrụ dike njem nleta.
Maazị Richard kwadoro nhọpụta ya n'ikwu, sị:
Amaara m ma rụọ ọrụ na ọrụ dị iche iche na Jens na -apụ ma gbanyụọ ihe karịrị afọ 10. O nwere ikike pụrụ iche ijikọ ndị mmadụ site na ngalaba na ọrụ niile, wee mee 'ịgụnye' n'ime ihe bara uru na ihe a na -ahụ anya.
Ọ na -enwe ahụ iru ala na ezi obi na -arụ ọrụ na ndị ọrụ gọọmentị, ndị mmeri nke ụlọ ọrụ na ndị NGO; na n'ụzọ ụfọdụ jisiri ike chọta ụzọ dị mma iji mee ka usoro nkwukọrịta dị mma na nghọta dị n'etiti ndị otu a, na-agabiga ọnọdụ ndị nwere oke ọria '' na mgbe ụfọdụ mmegide akụkọ ihe mere eme).
N'ime ọrụ ya na MTCO, Jens na-enwe ihe ịga nke ọma mgbe niile n'ịkwado njem nlegharị anya na agendas njem na-adigide, na-ewetara SMEs na obodo ọhụhụ na uru, yana ịkpakọba agendas na-aga n'ihu na mmekorita ọha na nkeonwe.
Iguzosi ike n'ihe Jen Jen na nka nke diplọma n'etiti ndị na -etinye ego bụ ihe siri ike iru; na ọ kacha esiri ike iji ezi obi nweta ya, yana ezigbo nsonaazụ.
N'ime oge ya dị ka onye isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya Mekong, Jens na -ewepụta echiche okike mgbe niile, wee rute ntinye na imekọ ihe ọnụ. Ọ naghị enwe nkụda mmụọ mgbe ndị mmadụ ji ọrụ n'aka itinye aka na ọ na -eme ka ị mara mgbe niile na enwere oge na ohere ọzọ. Nwoke ahụ bụ onye na -akpali mmụọ, na -eme ka mmezi siri ike yie ihe na -enweghị mgbali. Okwesiri ka amara ya.
Enwebeghị mkpọtụ ọ bụla n'azụ nhọpụta a. Ọ bụ ezi obi, site na ekele ọkachamara m nwere maka onye ndu maka mmekọ maka mgbanwe dị mma na njem. ”
Onye isi oche WTN Juergen Steinmetz na Jens nọdụrụ na Zoom.
Enweghị ụgwọ ọ bụla, na onye ọ bụla nwere ike ịhọpụta www.egburu.nez
September 26, 2021 na 07: 00
Mgbe a na -ekerịta ndị ọbịa na akụkọ na ebe ndị a, ọrụ a na -aghọ ihe a maara dị ka njem ihe nketa ọdịbendị. Ịga nke ọma na nkwado na nke a. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị njem, site na boomers ruo ọtụtụ puku afọ na -achọ ihe omume ọhụrụ, na -ahapụ ndepụta ọdịnala ebe aga achọta ihe pụrụ iche.